Umgangatho ophezulu weBrazil oMatshini wokuFakela oMbane
Ukufakwa rhoqo kwentsimbi engenasici yokulinganisa kwi-corogated (SS). Iithumbu zinobungakanani be-ID 1.575in (40mm) kunye ne-ID 2.99in (76 mm). Umthengi akakaze asebenzise ukufudumeza i-induction ngaphambili kwaye akaqhelananga nenkqubo yoqheliso. Injongo yolu vavanyo kukubonisa ukomelela kwamalungu.
• Umbhobho wesinyithi obhetyebhetye
• I-Ag45Sn i-alloy alloy
Umbhobho wesinyithi obhetyebhetye ngesazisi esingu-1.575in (40mm)
Izixhobo: I-DW-UHF-10KW i-heater brazing heater, i-coil yesiko-ID 1.654in (42mm), 1 jika
Ubushushu: malunga ne-1382 ° F (750 ° C)
Amandla: I-pre-curie - 7kW
Umbhobho wesinyithi obhetyebhetye ngesazisi esingu-2.913in (74mm)
Isixhobo: DW-UHF-10kw i-heuction yebrning induction, ikhoyili yesiko - ID 2.992in (76mm), ukujika oku-1
Amandla: I-pre-curie - 8 kW
Ixesha: umzuzu omnye kwimizuzwana engama-1
Umphunga kunye nezinto ezifakiweyo zilungiswe ngokuncamathisela kwefurux flux kwindawo yomphezulu.
Intonga yokugqobhoza ilungiselelwe ngendlela yesangqa esifanelekileyo kwisangqa sokudityaniswa.
Umbhobho kunye nezinto ezifakelweyo zibekwe kwikhoyili.
Ukufudumeza ekufakweni kufakwa kuloo ndawo de kube kugqityiwe ukwenziwa kobushushu.
Umbane wombane we-DW-UHF-10KW umatshini wokufakelwa wokungenisa impahla uhlangabezana neemfuno zale nkqubo.
Ukusebenza okungcono kumalungu ebubanzi obukhulu, sicebisa ukubonelelwa ngombane i-DW-UHF-10KW yokufudumeza isibiyeli.
Ngeemvavanyo, kwasetyenziswa i-static induction (jonga ividiyo), kodwa isikhokelo esiguquguqukayo kunye nekhoyili okanye uthotho lwethu lwe-DW-UHF luyacetyiswa.
Ukukhetha kunye nokuchanekileyo kwindawo yokushisa, okukhokelela ekungahambekini kwenxalenye yoxinzelelo kunye nokudibana
iindidi Teknoloji tags bhonce insimbi engenasici, Inkqubo yensimbi engenasici, I-Frequency Brazing steel steel, ukutyunjwa kwebhanki yentsimbi engenasici, steel stainless, i-brazing steel brain, ukungafakwisi ngentsimbi Post yokukhangela
Induction IiNxalenye zeBrazil zeNxalenye yeTungsten Carbide Plate